Madaxweyne Deni oo baarlamaanka ka baxay isagoo "xanaaqsan" - BBC News Somali
Kalfadhiga 45-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa maanta ka furmay magaalada Garoowe kaas oo ku bilowday weji aad u kulul iyo su'aal uu madaxweynaha si adag uga jawaabay.
Kulanka oo uu ka qaybgalay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, ayaa lagu weydiiyay su'aal aad u kulul oo dadkii meesha fadhiyay ay ku tilmaameen "in madaxweynaha ay ka careysiisay".
Waxaa jiray hadal hayn ku saabsan in "mooshin la geyn doono" fadhiga iyo in "khilaaf uu ka dhex jiro dowladda". Balse taa beddelkeeda hadallo kulul ayaa la isku dhaafsaday shirka.
Gudoomiyaha Baarlamanka Puntland, Cabdixakiim Maxamed Axmed (Dhoobo), ayaa furay kulanka isagoo sheegay "in madaxweynaha su'aalo la weydiin karo".
Xildhibaan Cawil Daad
Deni wuxuu ka mid ahaa madaxdii ka qeybgashay "caleema saarkii" Axmed Madoobe, madaxweynaha Jubbaland.
Maxaa ka si ah sawirkan ee dadku silloon ugu sheegayaan?